Izakhelo zokubhala iiresiphi zokupheka zeLizwi | Abadali be-Intanethi
Encarni Arcoya | 30/04/2022 09:24 | Ezahlukeneyo
Ukuba ukuthandile ukupheka, ngokuqinisekileyo ekugqibeleni ugqiba ukubhala phantsi zonke ezo ndlela zokupheka kunye nokwahluka ozamayo nezikusebenzelayo kwincwadi yamanqaku. Kodwa phantse akukho mntu ubhala ngesandla, kodwa usebenzisa ikhompyuter. Ukwenza oku, benza uxwebhu lokuzibhala phantsi, kodwa kuthekani ukuba sikunceda ngeetemplates zokubhala iiresiphi zokupheka zeLizwi?
Njengawe, singumpheki omncinci, kwaye nangona sithanda ukubhala ngesandla, ukuba zigcinwe kwikhompyutheni esaziyo ukuba aziyi kulahleka kwaye, ngaphezu koko, ziya kuhlala ixesha elide, luyinkuthazo yokuchitha. . Ke, kuthekani ngokuzama ezo templates kunye nathi?
1 Kutheni usebenzisa iithempleyithi zokubhala iresiphi kwiWord
2 Zeziphi izinto ezinayo itemplate yeresiphi yokupheka?
3 Izakhelo zokubhala iiresiphi zokupheka zeWord
3.1 Itemplate yasimahla yokubhala kunye nokuprinta iiresiphi
3.2 Envato element
3.3 Isakhelo seNcwadi yeresiphi kwiLizwi
3.4 Iresiphi elula eneLizwi
3.5 Iresiphi eneenkcukacha zesifanekiso
Kutheni usebenzisa iithempleyithi zokubhala iresiphi kwiWord
Khawube nomfanekiso-ngqondweni woku kulandelayo. Unokuhlanganiswa kweeresiphi kwaye rhoqo, kwithebhu nganye, kufuneka ubeke ukuba iresiphi, ukuba izithako, ukuba amanyathelo ... Akunjalo? ungagqibela ukruquka kukuhlala ubhala into enye. Ukongeza, baya kuphuma kwiphepha elingenanto, ngaphandle kwe "chicha" okanye umhlobiso. Ndiyathetha, iyadika. Kwaye ukuba ufuna ukubeka iifoto zendlela ephuma ngayo? Kuthekani ukuba ufuna ukukhankanya amaqhinga? Yonke ayinanto?
Iitemplates zokubhala iiresiphi zokupheka zeLizwi kulula kakhulu ukwenza, kodwa ukuba awufuni ukuchitha ixesha usenza enye kwaye ufuna ukuyisebenzisa, siya kukuxelela ukuba kunenzuzo ngakumbi koku kulandelayo:
Uya kuba nezinto eziphindaphindiweyo kuzo zonke iiresiphi ezikufutshane. Oko kukuthi, izithako, amanyathelo, kwanendawo yokubeka iifoto.
Zonke iiresiphi ziya kuvela ngokufanayo, enokukunceda ukuba uzenzele okanye uzenze zibukeke zintle njengoko ziya kufana zonke. Ngaphezu koko, unokuba neetemplates ezahlukeneyo ngokuxhomekeke ekubeni yi-appetizer, ikhosi yokuqala, ikhosi yesibini okanye idessert. Yaye uya kubahlula ngeliso lenyama bonke.
Uya konga ixesha, kuba uya kuba nesifanekiso esilungele ukubhala kuyo, ngaphandle kokuyidala ukusuka ekuqaleni.
Zeziphi izinto ezinayo itemplate yeresiphi yokupheka?
Ukuba ufuna ukuzama ukwenza itemplate yeresiphi yokupheka ngokwakho, nokuba yile nto uyithunyiweyo njengomyili, okanye ngenxa yokuba ufuna ukuba yimvelaphi kwaye uzenzele eyakho, yazi ukuba izinto ezibalulekileyo ziya kuba:
Isihloko, kule meko iya kuba yigama leresiphi ngokwayo.
Umxholo ongezantsi, ukuba ufuna ukubeka eyiphi ichef okanye ukuba yenye indlela, inelinye igama...
Izithako, ukudwelisa uthotho lwezinto ezibalulekileyo ukuze kuphunyezwe.
Ukulungiselela. Unako kwakhona ukubeka amanyathelo ukuba kukho ezininzi ukuba kufuneka wenze. Apha kulapho kuya kufuneka ushiye indawo eninzi.
Gqibela, unokongeza ezinye izinto ezifana nexesha lokulungiselela, amanqaku xa kufuneka ubeke iqhinga okanye into esebenza kakuhle kuwe, izixhobo, luhlobo luni lokutya (ukuba i-dessert, ikhosi yokuqala, i-appetizer. ..).
Kodwa, njengoko sithetha, ngokulandelayo siza kukugcina ixesha elininzi.
Ukuba ungathanda ukugcina ezinye iitemplates zokubhala iresiphi ye-Word, nokuba ukubonisa imizekelo kubathengi bakho, okanye ukuzisebenzisa ngokwakho, senze uphando oluncinci apha ukukongela ixesha elingakumbi. Ezi zezona sifumene eyona yokuqala.
Itemplate yasimahla yokubhala kunye nokuprinta iiresiphi
Le template ivela kwiYummy Recipes leyo ikuvumela ukuba uyikhuphele simahla. Ingxaki kukuba bakunika yona ngePDF kodwa ungazama ukusebenzisa iPDF kwisiguquli seLizwi ukukopa ifomathi kwaye ke ufumane oko ukufunayo. Nasemva kwexesha ungayichukumisa kwaye uyilungelelanise ngokuthanda kwakho.
Kule meko, akukhona ngokwayo itemplate, kodwa ezininzi. envatoelements Lelinye lamaphepha ewebhu apho iitemplates ezininzi (yazo zonke iintlobo) uya kuzifumana.
Ngoku, uya kuthi ihlawulwe, kwaye uchanekile ngokupheleleyo, kodwa kufuneka uyazi loo nto Ikuvumela ukuba ube neentsuku ezi-7 zovavanyo apho unokukhuphela yonke into oyifunayo. Ke kufuneka ubhalise nge-imeyile kwaye wenze ukukhangela iresiphi yokubhala iitemplates zeLizwi kwaye uzikhuphele. Ngaphezulu nje kweyure ngokuqinisekileyo uya kuba nomkhosi olungileyo wabo Kwaye eyona nto ingcono kukuba abayi kukubiza.
Isakhelo seNcwadi yeresiphi kwiLizwi
Ngesi sihlandlo, nakwiOfisi ngokwayo, isinika itemplate yokukhuphela kwiLizwi ukuba inokuba yintoni incwadi yeresiphi. Apha ubeka phambili ngaphezu kwawo wonke umfanekiso wesitya, ngoko kungcono wenze ezi uzigqibileyo.
Enyanisweni, uya kuba nesigqubuthelo ngoko unokubeka "incwadi yeresiphi" yakho kwaye emva koko ithemplate apho unokongeza khona igama leresiphi, ixesha kunye nenani labantu, izithako, ifoto, amanyathelo anezithombe, njl.
Yijonge krwaqu kwaye ugcine engqondweni ukuba usuka kwiLizwi ungalilungisa kamva ngokuthanda kwakho.
Iresiphi elula eneLizwi
Ukuba awufuni ukuntsonkotha kakhulu, unayo le template yeresiphiNgesiNgesi, ewe. Kuyo uya kufumana igama leresiphi njengesihloko, ngoko inani labantu, ixesha lokulungiselela kunye nexesha elipheleleyo.
Izithako kunye namanyathelo alandelayo, eshiya indawo yamanqaku.
Ungabandakanya ifoto apha kwakhona, nangona kwitemplate yokuqala ayinayo.
Nangona kunjalo, sisiqalo esihle ukuze ukwazi khuphela kwaye uyisebenzise njengomzekelo.
Iresiphi eneenkcukacha zesifanekiso
Le template yeLizwi yi enye yezona zinto zininzi sizifumeneyo kuba inamaphepha ama-3 okubhala. Umzekelo ukunika i-mushroom kwaye inyani kukuba itsala ingqalelo kuba apha unokwandisa ukunika iinkcukacha ezinkulu.
Kwiphepha lokuqala uya kuba nohlobo lwesigqubuthelo, apho ngefoto kunye nezinye izihloko kuya kuba kuhle kakhulu.
Emva koko, kweyesibini ishiywe ikakhulu izithako kunye namanqaku athile kubo. Ekugqibeleni, kwiphepha lesithathu amanyathelo okulungiselela iresiphi aya kufakwa.
Inyani yeyokuba kwiLizwi akukho zitemplate ezininzi zasimahla, ke eyona ndlela ilungileyo kukwenza elo qhinga kwi-Envato kwaye ukhuphele zonke izinto ozithandayo okanye ozaziyo ezinokukusebenzela. Ngaloo ndlela unokuba neetemplates zeeresiphi kwiLizwi ngaphandle kokuchitha ixesha uzenza ngokwakho (ubuncinci ekuqaleni).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Izakhelo zokubhala iiresiphi zokupheka zeWord
uphawu lwentsimbi enzima